Sida loo Play Videos on TV ka USB
Yaa u maleynayaa in sano oo kaliya 10 ka hor ah ul USB celcelis ahaa in meel la qabto agagaarka gigabyte ah liita xogta karin? Maanta, in ay ku filnaan doonto ilaa 2 saacadood ee 720p video, oo meel u dhow qadarka madadaalada digital aad rabto in aad qabto in aad jeebka ku dhacdo waa internet ka haywire tagaa. Ka sokow, saftay xogta ISP ka dhigan tahay in aad wax badan ka fiican iska soo degsado show oo dhan hal mar oo u badan iyo daawashada jeer mar kale inta ugu badan ee aad jeceshahay, oo aan gacan iyo lug ah. Nasiib wanaag, technology ayaa si joogto ah la noo siiyo qaab aad u fiican qiimo ka jaban, hadana waxaan leenahay 128 ulaha USB GB in kharash ka yar yahay $ 40.
Sets TV ahaayeen kaalinta la mid ah, inkasta oo ay jiraan ayaa horumar toosaa duurka in sidoo kale. The ab ka weyn gaar ahaan xusuusan laga yaabaa in daawashada bandhigyada iyo isboortiga ee madow iyo caddaan nooc TV in ay muujiyaan xal laga yaabaa 240p kaliya iyo sawirka u eegay aan shaqeyn. Maanta, waxaan heysanaa nooc TV 24-inch 1080p-awood u heli karaa Amazon u yar sida $ 160.
Marka aad isu geeyo labada - ulaha USB casri ah oo casri ah nooc TV - aad timaadid isku dhafan ah oo aad u awood badan oo dabacsan u riyaaqayaa video content kasta, xaq waxaa qolka aad ku nooshahay, ka yar $ 200, oo ay ku jiraan kharashka maraakiibta. Ha illoobin ku saabsan hunching aad monitor ama daawashada webigu ku lahayn oo xayeysiis obnoxiously cod weyn, dib in aad Gogol jiifsaday, oo wuxuu ku raaxaysan show la soo bandhigay ugu weyn ee gurigaaga - shaashadda TV aad. Waa madadaalada marka aad u rabto iyo sida aad u rabto. Waxaad fog iyo aad u taliyo jadwalka TV. Ha degaan wax ka yar in.
Qaybta 1aad: Sida loo Play Videos on TV ka USB?
Qeybta 2: TV Best muujiyaa Downloader - Wondershare AllMyTube
Buuxsamay kibirsan, aad go'aansato in aad u bartaan USB ah, go'an TV oo tayo leh iyo show ah in garaaca sharaabaad aad off. Waxaad nuqul ka muujiyaan in USB iyo ... hadda waa maxay? Set TV The uma muuqato in ay leeyihiin dekedda USB ah. Xitaa haddii aadan u maamulaan si aad u hesho mid ka mid ah, in ay u muuqato in uusan ahayn in la aqoonsado in aad USB ama show. Dhibin, tan iyo ujeedada qoraalkan waa in aad oo dhan baro oo ku saabsan geftinka ilaa USB ah iyo ciyaaro file a video ka on set TV aad.
Inkasta oo ay jirto dekedda USB on your TV ah, waxaa macnaheedu ma aha waxa loo isticmaali karaa play video files, tan iyo nooc TV qaar ka mid ah waxay leeyihiin dekedda keliya farsamo dayactirka aad u gashanayso ay USB kartoo oo aad marin u software set TV ee. Xaaladaha kale, dekedda USB ah waxaa laga yaabaa in aan firfircooneyn ilaa uu karti loo marayo doorashada ka helay qoto dheer in menu fursadaha aad TV.
Saddex talooyin ka USB ciyaaro video on TV
1. In loo sahlo dekedda USB - nooc TV qaarkood waxay leeyihiin dekedda USB naafo by default ah. La tasho buuga warqad u yimid iyadoo TV aad ama ka heli koobi online si aad u aragto sida ay u awood dekedda USB ah. Marka ay timaado in nooc LG TV, USB ah in karti doonaa marka aad u shaqeysiin dhex menu qarsoodi ah heli isku qarsoon macsarada muhiimka ah ee aad u fog.
2. qaabab socon iyo qaraarada - Haddii dekedda USB weli ma shaqeyn doono ka dib markii aad u karti, isku day hubinta si aad u aragto qaababka iyo qaraarada set TV uusan taageero. Si aad u ogaato tan, tixraac buuga aad heshay aad TV.
Nooca USB 3. Check - nooc TV qaarkood ma aqbali doono ulaha USB haddii aanay ee gaarka u gaar ah ama sameeyo saaraha gaar ah. Si aad u ogaato haddii ay tahay kiiska iyo nooca USB shirtagi aad u baahan tahay, hubi buugga user in aad heshay aad TV-ga. Si aad u ogaato nooca file nidaamka aad USB, waxaa furaysto galay computer ka iyo kala guryaha menu.
YouTube waa been abuurtay ugu weyn tan iyo kibis jarjaran. Waxaad daawan kartaa wax ka homebrew videos in HD Hollywood filimada, malana waxba soo gadan YouTube Cas. Isjiidka, kartoonada, dokumantaaryada, sida-sawirro, videos music - dhammaan kuwa xaq u yihiin farahaaga. Laakiin, waxa dhaca marka aan ka geli kartaa internetka, sabab kasta ama aad riixay badan ku laayeen oo ay weli 10 daqiiqo YouTube ad kale?
Waxa ay noqon doontaa fikrad aad u fiican in ay offline version ah ee jecel videos, wax kasta oo ay dhici kara inuu ahaado qoyskaaga. Ka dibna waxaad sidoo kale u geliyey yaabaa in aad USB oo aan u daawado on your TV. Taasi runtii macaan noqon lahaa. Tani waa xaalada ugu fiican ee Wondershare AllMyTube.
Save videos la Wondershare AllMyTube
Bilow barnaamijka iyo interface muuqan doonaa.
Copy URL ee video aad rabto oo guji "URL paste"
Video waxaa laga baarayaa iyo download ku bilaaban doono.
Dooro "Beddelaan" in la beddelo qaab file of video in. Waxaad dooran kartaa ka tiro balaadhan oo ah qalabka warbaahinta loo maqli karo, oo ay ku jiraan consoles'ka ciyaarta iyo telefoonada gacanta.
Wi-Fi Transfer tab sidoo kale kaa caawin karaan inaad ku wareejiso video ah soo bixi ama mid ka mid ah qoraalkii ay diinta qalab mobile. Waxaad u baahan doontaa in Wondershare Player app ee lagu rakibay qalabka iyo lambarka sirta QR-muuqata.
Iibso Cheap Blu-ray Movies Online
> Resource > Video > Sida loo Play Videos on TV ka USB?